Posted by: chhepyastra weekly | अक्टोबर 9, 2010
समय नपुगेर संविधान नबनेको होइ न
सीपी गजुरेल ‘गौरव’, सचिव- एकीकृत नेकपा माओवादी
०	दश पटकको निर्वाचनले पनि मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन सकेन, यसले त लोकतन्त्रकै उपहास गरेन र ?
संसद्मा भएको पटक-पटकको निर्वाचनले लोकतन्त्रको उपहास त गरेकै छ । त्यसको साथसाथै संविधानसभालाई समेत पङ्गु बनाउने प्रतिगामीहरूको योजना रहेको छ । त्यो पनि क्रमशः सफल हुादै गएको छ ।
०	यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहन्छ त ?
यही अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहादैन । यतिबेला नेपाली काग्रेसको बाकी रहेको इमेज पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । नेपाली कााग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी तत्काल छाडिहाल्ने स्थिति देखिादैन ।
०	संविधान निर्माणको लागि दोस्रो पटक थपिएको एक चौथाई समय पनि ढल्किसक्यो । तर, संविधान निर्माणको लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यसले त झनै अस्थिरता निम्त्याउादैन र ?
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नै बढेको छैन भन्ने त होइन थोरै अगाडि बढेको छ । समय नपुगेर दुई वर्षमा संविधान नबनेको होइन । संविधान नबन्नुको मुख्य कारण संविधान कस्तो बनाउने भन्ने बहस नटुङ्गएिर हो । दलहरूबीच जारी रहेको बहस टुङ्गयिो भने संविधान निर्माण गर्न धेरै समय लाग्दैन । यतिबेला यो संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रको कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएको हो ।
०	तपाईंहरूले हालसालै शान्ति, संविधान र सरकारको लागि एमालेसाग सहमति गर्नुभयो, त्यसको पनि उल्लेखनीय भूमिका देखिएन नि ?
हाम्रो पार्टी र एमालेबीच भएको सहमतिले कााग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न र उसकै नीतिअनुसारको संविधान बनाउने भन्ने एमालेभित्रको एक गुटको योजनालाई चकनाचुर पारिदिएको छ । सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एमाले र हामीबीच भएको सहमतिले तत्कालको लागि काग्रेसका उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको छ ।
०	यहाका दलहरूबीच जस्तोसुकै सहमति भए पनि भारतले तपाईंहरूको नेतृत्वमा सरकार दिादैन भनिन्छ नि ?
यो कुरा साचो हो । यही प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको क्रममा हाम्रो उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेपछि भारतले आˆनोतर्फबाट त्यसलाई बिथोल्न सिधै हस्तक्षेप गरेको दुनियाले देखेकै हो । नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने, सेना समायोजन गर्ने, शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने यी सबै प्रक्रियालाई आˆनो चाहना भारतले प्रयोग गरिरहेको स्पष्टरूपमा देखिएको छ ।
०	यही भएर तपाईंहरूले भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुभएको हो ?
हाम्रो पार्टीको योजना राकेश सुदलाई विरोध गर्ने भन्ने थियो, त्यस्तो अभद्र व्यवहार गर्ने भन्ने थिएन । नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी आएर हस्तक्षेप गर्नु राम्रो कुरा होइन । त्यसको राजनीतिक विरोध गर्ने, काला झण्डाहरू प्रदर्शन हाम्रो पार्टीको निर्णय हो । भारतप्रति जनताको आक्रोश अलि बढी नै छ । सोलुका स्थानीय जनताले फेरि आˆनो क्षेत्रमा खम्पाकाण्ड उठाएर अशान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्व र हिंसा मच्चाउने काम हुादैछ कि भन्ने आशंका गरेका छन् । त्यसैले गर्दा स्थानीय जनताले आक्रोशको रूपमा राजदूतमाथि त्यस्तो व्यवहार गरेको हुनुपर्छ । ढुङ्गा र जुत्ता हान्ने हाम्रो पार्टीको नीति होइन ।
०	यस्तो चक्रब्यूहबाट तपाईंहरू कसरी उम्कनु हुन्छ ?
अब हामी नया प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ । नया प्रक्रिया भनेको व्यापक जनसहभागिता भएको जनआन्दोलन नै हो । आन्दोलनबाट मात्र निकास निस्कन्छ, होइन भने हामी चक्रब्यूहमा फसिरहन्छ ।
०	तपाईंहरूको पार्टीका सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । तपाईंहरूले यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौताविरुद्ध छ भन्दै आउनुभएको छ यस विषयमा प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
बालकृष्ण ढुङ्गेलमाथिको फैसला विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत छ । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा विगतमा भएका सबै मुद्दाहरू खारेज गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यो मुद्दालाई पुनः जगाउनुको अर्थ शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्नु हो । यो विषय बालकृष्ण ढुङ्गेलको मात्र होइन, समग्र शान्तिप्रक्रियाकै कुरा हो । हाम्रा धेरै साथीहरूलाई मुद्दा लगाएर फसाउने काम भएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई भङ्ग गर्न चाहने तत्वहरूकै चालबाजीका कारण यस्तो भएको हो ।
०	तपाईंहरूको पार्टीको विस्तारित बैठकको पूर्वघोषित स्थान र मिति सरेको छ, यस कारण के होला
हाम्रो विस्तारित बैठकमा ठूलो संख्यामा देशैभरिबाट सहभागी हुने भएकाले चितवनमा हावापानी पनिनमिल्ने र रोगको संक्रमणसमेत हुन सक्ने भएकाले स्थान सारेका हा । अरु यसका केही कारण छैन ।
०	स्थान र मिति सर्नुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व हो भनिन्छ नि ?
होइन, यसको पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा कुनै सम्बन्ध नै छैन । सबैलाई सजिलो होस् भनेर मात्र हामीले स्थान सारेका हा ।
मुलुकले अहिले अग्रगामी निकास खोजेको छ । यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, विदेशी शक्तिहरूसमेत अग्रगमनलाई रोक्नको लागि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपालको आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न नेपाली जनतालाई चेतना प्रवाह गर्न यस पत्रिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्न चाहन्छु ।